Sei Zetar - Zetar Industry Co., Ltd.
Plastic jekiseni Mould
Silicone jekiseni Kuumbwa
Bed Bug Musungo
Umbwa muna 2005, uye kunobva muno Shanghai China.At 2017, tiri mubayiro wacho "China High Quality nokutengesa" mubayiro Alibaba uye ichinyatsozivikanwa somutungamiri anokurumidza dzokai, rweruzhinji China mapurasitiki jekiseni kuumbwa epurasitiki jekiseni tooling uye nokukurumidza prototyping mabasa.
2016 Zetar akatamira kuva 50,000 akaenzana-rutsoka chitoro chiri kumativi 35km kubva Shanghai chengarava uye Pudong Airport. Zvino Zetar ane 6 mukuru mainjiniya, vose vane makore anopfuura 10 ruzivo mupurasitiki jekiseni Kuumbwa indasitiri. Uye hafu wavo vanogona kutaura Chirungu.
Kweanopfuura makore 13, tava tikashumira anokurumidza dzokai epurasitiki jekiseni Kuumbwa uye epurasitiki jekiseni anoumba zvinodiwa nemakambani makuru uye diki - kubva Fortune 100 kusvika paruzivo kutanga-ups.We've akashandisa unyanzvi hwedu zvakawanda maindasitiri, kusanganisira zvokurapa mano, motokari, utano, zvemagetsi, kurongedza zvinhu, kuvaka zvinhu, mhuri, matoyi, panze yemitambo giya uye zvakawanda. No basa zvakanga zvakagadzirwa yako kana kwazvo kurongeka kwenyu
Jekiseni Parts Kunoumbwa, Injection Molding, Jekiseni Kunoumbwa Plastic Container, Overmolding jekiseni Kuumbwa, Plastic Parts , Jekiseni paaivaumba Danho,